२ घण्टा खुलेको बजारमा पनि आएन रौनक, ७.५७ अंकले नेप्से घट्दा दूरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार | आर्थिक अभियान
२ घण्टा खुलेको बजारमा पनि आएन रौनक, ७.५७ अंकले नेप्से घट्दा दूरसञ्चार कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार
असार ३, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रवार नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ५७ अंक घटेर बन्द भएको छ । परिसूचक १ हजार ९७१ दशमलव ३६ विन्दुमा झरेको हो । बिहीवार भने बजार साढे १२ अंक बढेर बन्द भएको थियो ।
असार महीनादेखि साताको ६ दिन नै शेयर बजार खुला हुने भएको छ । नेप्सेको जेठ २५ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार असार १ गतेबाट आइतवारदेखि बिहीवारसम्म ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म र शुक्रवार ११ बजेदेखि १ बजेसम्म बजार खुल्ने निर्णय भएको हो ।
यस आधारमा सार्वजनिक बिदाको दिन र शनिवार बाहेक बजार खुला हुनेछ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि आइतवार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि बजार जेठ १ गतेपछि सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सञ्चालन हुँदै आएको थियो । आइतवारको सार्वजनिक हटेसँगै नेप्सेले आइतवारदेखि शुक्रवारसम्म नै बजार खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस दिन कारोबारमा आएका २२० ओटा धितोपत्रको २३ लाख ५५ हजार १ कित्ता शेयर १५ हजार १६३ पटकमा रू. ७३ करोड ६३ लाख १२ हजार १५७ दशमलव ९९ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका २२० ओटा धितोपत्रमध्ये आधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा शुक्रवार ९ दशमलव ९९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५९६ दशमलव ७० पुगेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य ४ दशमलव शून्य २ प्रतिशत वृद्धि भएर रू. ४३७ दशमलव ३० पुगेको छ ।
त्यसैगरी, शुक्रवार सबैभन्दा बढी रिभर फल्स पावर लिमिटेडको शेयरमूल्य ५ दशमलव ९३ प्रतिशत घटेको हो । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २७३ मा झरेको छ । त्यसैगरी दोस्रोमा बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ४ दशमलव ६४ प्रतिशत घटेर रू. ३७० कायम भएको छ ।
सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको भएको छ । कम्पनीको रू. १० करोड १४ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ८९० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रो कम्पनीमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक रहेको छ । कम्पनीको रू. ६ करोड ४७ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो ।
कारोबारमा आएका १३ समूहगत परिसूचकमध्ये म्युचुअल फण्ड समूह बाहेक सबै समूहको समूहगत परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो । म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।